မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် 8GB LPDDR5 DRAM တွေကို ထုတ်လုပ်တော့မယ့် Samsung – DigitalTimes
Samsung အနေနဲ့ 8GB LPDDR5 DRAM Chip အကြောင်းတွေကို မနေ့ ညနေတုန်းက ကြေငြာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ 8GB LPDDR5 တွေဟာ ကုမ္ပဏီရဲ့ ပထမဦးဆုံး 10nm အမျိူးအစား Chip များ ဖြစ်သလို 5G နဲ့ AI-powered Mobile Applications များအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားတာ ဖြစ်ကြောင်း Samsung က တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ခုနှစ်တုန်းကလဲ Samsung အနေနဲ့ 8GB LPDDR4 Chip တွေကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အခု ထပ်မံ ထုတ်လုပ်သွားမယ့် Chip တွေကတော့ LPDDR5 အမျိူးအစားများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ၂၀၁၇ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတုန်းက 10nm 16GB GDDR6 DRAM တွေကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့ 16GB DDR5 DRAM တွေကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အခု 8GB LPDDR5 ကတော့ Samsung ရဲ့ Premium DRAM အမျိူးအစားတွေ ဖြစ်တဲ့ 16GB GDDR6 နဲ့ 16GB DDR5 တို့ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာတွေကို ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
8GB LPDDR5 ရဲ့ Data rate က 6400 Mb/s ရှိပြီး လက်ရှိ Flagship devices တွေမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ DRAM chips တွေထက် ၁.၅ ဆ အထိ ပိုမို မြန်ဆန်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Samsung ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ Flagship စမတ်ဖုန်း Galaxy S9 မှာ LPDDR4X RAM Chip ကို အသုံးပြုထားပြီး Data rate က 4266 Mb/s ရှိပါတယ်။ LPDDR5 ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် Data rate တွေကလည်း ပိုမိုကောင်းမွန်လာပါတယ်။ Data rate ပိုမိုကောင်းမွန်လာတဲ့အတွက် 51.2GB ကို ၁စက္ကန့်အတွင်း ပေးပို့နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ Full-HD ဇာတ်ကား ၁၄ကားကို ၁စက္ကန့်အတွင်း ပေးပို့နိုင်တာနဲ့ ညီမျှပါတယ်။
8GB LPDDR5 တွေကို 6400 Mb/s @ 1.1 Operating Voltage (V) နဲ့ 5500 Mb/s @ 1.05V ဆိုပြီး Bandwidth ၂မျိူးနဲ့ ထုတ်လုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်ထရီအား စားသုံးမှု အပိုင်းမှာလည်း ယခင် LPDDR4X DRAM တွေထက် ၃၀% အထိ လျော့ကျသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ Samsung က ပြောကြားထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Artificial Intelligence (A.I.) နဲ့ Machine Learning Applications တွေကိုလည်း များစွာ အထောက်အကူပြုတယ်လို့ သိရပါတယ်။
လောလောဆယ်မှာတော့ 8GB LPDDR5 DRAM တွေကို Prototype အနေနဲ့သာ ထုတ်လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း 8GB LPDDR5 DRAM ပါဝင်တဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေကို မကြာခင်မှာ မြင်တွေ့ရနိုင်ဖွယ် ရှိပါတယ်။ နောက်လ ၉ရက်နေ့မှာ မိတ်ဆက်သွားမယ့် Galaxy Note9မှာတော့ LPDDR5 DRAM တွေ ပါဝင်နိုင်ခြင်း မရှိဘဲ Galaxy S10 မှာ စတင်မြင်တွေ့နိုင်ကြောင်း ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များက ခန့်မှန်း ပြောဆိုထားကြပါတယ်။
Ref: sammobile, samsung
မိုဘိုငျးဖုနျးမြားအတှကျ 8GB LPDDR5 DRAM တှကေို ထုတျလုပျတော့မယျ့ Samsung
Samsung အနနေဲ့ 8GB LPDDR5 DRAM Chip အကွောငျးတှကေို မနေ့ ညနတေုနျးက ကွငွောခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ 8GB LPDDR5 တှဟော ကုမ်ပဏီရဲ့ ပထမဦးဆုံး 10nm အမြိူးအစား Chip မြား ဖွဈသလို 5G နဲ့ AI-powered Mobile Applications မြားအတှကျ ရညျရှယျပွီး ထုတျလုပျထားတာ ဖွဈကွောငျး Samsung က တရားဝငျ ထုတျပွနျကွငွောခဲ့ပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ခုနှဈတုနျးကလဲ Samsung အနနေဲ့ 8GB LPDDR4 Chip တှကေို ထုတျလုပျခဲ့ပါသေးတယျ။ အခု ထပျမံ ထုတျလုပျသှားမယျ့ Chip တှကေတော့ LPDDR5 အမြိူးအစားမြား ဖွဈကွပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ၂၀၁၇ခုနှဈ ဒီဇငျဘာလတုနျးက 10nm 16GB GDDR6 DRAM တှကေို ထုတျလုပျခဲ့ပွီး ဖဖေျောဝါရီလမှာတော့ 16GB DDR5 DRAM တှကေို ထုတျလုပျခဲ့ပါတယျ။ အခု 8GB LPDDR5 ကတော့ Samsung ရဲ့ Premium DRAM အမြိူးအစားတှေ ဖွဈတဲ့ 16GB GDDR6 နဲ့ 16GB DDR5 တို့ရဲ့ နောကျဆုံးပျေါ နညျးပညာတှကေို ပေါငျးစပျလုပျဆောငျထားတာ ဖွဈပါတယျ။
8GB LPDDR5 ရဲ့ Data rate က 6400 Mb/s ရှိပွီး လကျရှိ Flagship devices တှမှော အသုံးပွုနတေဲ့ DRAM chips တှထေကျ ၁.၅ ဆ အထိ ပိုမို မွနျဆနျတယျလို့ သိရပါတယျ။ Samsung ရဲ့ နောကျဆုံးထှကျရှိထားတဲ့ Flagship စမတျဖုနျး Galaxy S9 မှာ LPDDR4X RAM Chip ကို အသုံးပွုထားပွီး Data rate က 4266 Mb/s ရှိပါတယျ။ LPDDR5 ဖွဈသှားတဲ့အတှကျ Data rate တှကေလညျး ပိုမိုကောငျးမှနျလာပါတယျ။ Data rate ပိုမိုကောငျးမှနျလာတဲ့အတှကျ 51.2GB ကို ၁စက်ကနျ့အတှငျး ပေးပို့နိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါဟာ Full-HD ဇာတျကား ၁၄ကားကို ၁စက်ကနျ့အတှငျး ပေးပို့နိုငျတာနဲ့ ညီမြှပါတယျ။
8GB LPDDR5 တှကေို 6400 Mb/s @ 1.1 Operating Voltage (V) နဲ့ 5500 Mb/s @ 1.05V ဆိုပွီး Bandwidth ၂မြိူးနဲ့ ထုတျလုပျသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဘကျထရီအား စားသုံးမှု အပိုငျးမှာလညျး ယခငျ LPDDR4X DRAM တှထေကျ ၃၀% အထိ လြော့ကသြှားမှာ ဖွဈတယျလို့ Samsung က ပွောကွားထားပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Artificial Intelligence (A.I.) နဲ့ Machine Learning Applications တှကေိုလညျး မြားစှာ အထောကျအကူပွုတယျလို့ သိရပါတယျ။
လောလောဆယျမှာတော့ 8GB LPDDR5 DRAM တှကေို Prototype အနနေဲ့သာ ထုတျလုပျထားတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး 8GB LPDDR5 DRAM ပါဝငျတဲ့ စမတျဖုနျးတှကေို မကွာခငျမှာ မွငျတှရေ့နိုငျဖှယျ ရှိပါတယျ။ နောကျလ ၉ရကျနမှေ့ာ မိတျဆကျသှားမယျ့ Galaxy Note9မှာတော့ LPDDR5 DRAM တှေ ပါဝငျနိုငျခွငျး မရှိဘဲ Galaxy S10 မှာ စတငျမွငျတှနေို့ငျကွောငျး ကြှမျးကငျြ ပညာရှငျမြားက ခနျ့မှနျး ပွောဆိုထားကွပါတယျ။
Tags: 8GB LPDDR5 DRAM, samsung